Ukukhansela phakathi nokuhlala kwakho - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Izimali ezibuyiswayo – isihloko sosizo
Uma kunokuthile okungalindelekile okuvelayo phakathi nokuhlala kwakho, situsa ukuba uthumelele uMbungazi wakho umyalezo ukuze nixoxe ngesixazululo kuqala. Kungenzeka akusize uyilungise masinyane. Uma ungathanda ukucela ukubuyiselwa imali noma ukukhansela ukubhukha kwakho, singakusiza uqale ucele kuMbungazi wakho.
Thumelela uMbungazi wakho umyalezo
Ngokuvamile kungumbono omuhle ukuzama ukukhuluma noMbungazi wakho kuqala. Ungathumelela uMbungazi wakho umyalezo ngokuqondile nge-inbox yakho ukuze nixoxe ngesixazululo. Uma kunesixazululo enivumelana ngaso noMbungazi wakho, makhulu amathuba okuba isicelo sakho sigunyazwe. Uma uMbungazi wakho eseyilungisile kakade inkinga yakho futhi ukwazi ukuqhubeka nokuhlala kwakho, khona-ke yeqa lezi zinyathelo ezilandelayo.
Qala isicelo engakapheli amahora angu-24
Uma usadinga ukukhansela ukubhukha kwakho phakathi nokuhlala kwakho, singakusiza uqalise isicelo sokuxazulula inkinga noMbungazi wakho. Uma wenza lokhu, ungakhetha ukucela uMbungazi wakho ukuba alungise inkinga, ucele ukubuyiselwa ingxenye yemali, noma ucele ukukhansela ukubhukha kwakho ukuze ubuyiselwe imali ephelele. Umbungazi wakho uzobe eseba nehora elilodwa lokuphendula isicelo sakho. Uma enqaba noma engaphenduli, ungacela i-Airbnb ukuba ingenele isize.
Qongelela ubufakazi: Uma kungenzeka, thatha izithombe noma amavidiyo ukuze uveze izinkinga ezinjengesevisi engekho noma ephukile.
Thumela isicelo kuMbungazi wakho: uzochaza inkinga, unikeze izithombe uma ukwazi, bese utshela uMbungazi ukuthi ungathanda ukuyixazulula kanjani. Kubalulekile ukuthola usizo kungakapheli amahora angu-24 wokuqaphela inkinga. Ngaphandle kwalokho, inani lemali obuyiselwa yona lingathinteka.
Lindela impendulo yakhe: Uma enqaba noma engaphenduli phakathi nehora elilodwa, ungacela i-Airbnb ukuba ingenele ukuze isize. I-Airbnb izohlola Inqubomgomo Yokubuyisela Isivakashi Imali ukuze ikusize uxazulule inkinga.
Okufanele ukwenze uma indawo ohlala kuyo ingahlanzekile lapho ungena
Uma ungena uthole indawo ingahlanzekile, thintana noMbungazi wakho bese uthinta i-Airbnb. Kubalulekile ukuthola usizo engakapheli amahora an…
Uma Umbungazi wakho ekhansela ukubhukha kwakho
Uma ukubhukha kwakho kukhanselwe Umbungazi wakho, sizokubuyisela ngokuzenzakalelayo imali ephelele.
Thola imininingwane yendlela ukukhansela okusingathwa ngayo uma kwenzeka izigameko ezingalindelekile ongenakwenza lutho ngazo ngemva kokubhu…